နိုးထမှုအတွက် နှလုံးသားငိုကြွေးသံ! | Heartcry for Revival!| Real Conversion
HEARTCRY FOR REVIVAL!
လော့စ်အိန်ဂျယ်လ်ရှိ Baptist Tabernacle အသင်းတော်၌ ၂၀၁၇ခုနှစ်
ဇူလိုင်လ ( ၁၆ ) ရက်၊ နံနက်ပိုင်းတွင် ဟောကြားသော
Lord’s Day Morning, July 16, 2017
“ငါ့ကိုခေါ်လော့ငါထူးမည်။ ကြီးသောအရာ၊ သင်မသိနိုင်အောင် နက်နဲ သောအရာတို့ကို ငါပြမည်၊” ( ယေရမိ ၃၃း ၃ )
ယေရမိသည် အချုပ်ထဲသို့ရောက်နေခဲ့သည်။ သူသည် ယုဒလူများ ကျွန်ခံရမည်အ ကြောင်း ဟောပြောသောကြောင့် ထောင်ထဲပို့ခြင်းခံရပါသည်။ ယေရမိသည် မျှော်လင့်ချက်မဲ့ လျက်နေသည်။ သူ့လူတို့ကို ဘုရားသခင် စွန့်ပစ်ထားသည်ဟု သူခံစားခဲ့ရသည်။ သူသည် မျှော်လင့်ချက်အားလုံးကို စွန့်လွှတ်ပြီး အချုပ်ခန်းထဲတွင် ချုပ်နှောင်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါသည်။ ယခု တွင် သခင်ဘုရားသသည် သူ့စိတ်နှလုံးထဲတွင် စကားပြောခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ၎င်း အား ဤသို့ဆိုသည်။
“ငါ့ကိုခေါ်လော့ငါထူးမည်။ ကြီးသောအရာ၊ သင်မသိနိုင်အောင် နက် နဲသောအရာတို့ကို ငါပြမည်၊” ( ယေရမိ ၃၃း ၃ )
လွန်ခဲ့သောတနင်္ဂနွေညတွင် “နိုးထမှုတွင်လိုအပ်သော ဆုတောင်းခြင်းတိုက်ပွဲ” အ ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်ဟောပြောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရုပ်ဝါဒီတို့၏နတ်ဆိုးကြီးများလက် အောက်တွင် အသက်ရှင်နေကြသည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတော်ကို စွန့် ပစ်ထားခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံရောက်လာဖို့ အလိုမရှိကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ငိုက်မြည်းအိပ်ပျော်ခြင်းထက် ဆိုးသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်သည် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်မှုအားနည်းနေပါသည်။ အချိန်ကာလသာ ရွေ့လျားနေသည်။ အဘယ့်ကြောင့် လှုပ်ရှားစေပါသနည်း။ အဘယ့်ကြောင့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေသနည်း။ ကျွန်ုပ် တို့၏ ငိုးမြည်းခြင်းတွင် တည်ရှိနေကြပါရစေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အားကျိုးမာန်တက် ဆုတောင်း ခြင်းအသက်တာဆီသို့ မသွားလိုကြတော့ဘဲ ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်နှင့်တန်ခိုးတော် ၌လည်း မရှိလိုကြပါ။ လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်က လူတစ်ဆယ့်ခုနှစ်ဦး ပြောင်း လဲလာခဲ့ကြသည်။ ဒေါက်တာ Chan သည် ပြန်လည်နိုးကြားမှုကို ရရှိလာခဲ့သည်။ John Samuel Cagan သည် ဧဝံဂေလိတရားဟောကြားဖို့ စိတ်အားထက်သန်မှုရှိလာသည်။ Aaron Yancy နှင့် Jack Ngann တို့သည် သင်းထောက်လောင်းများဖြစ်လာကြသည်။ Christine Nguyen နှင့် မစ္စ Lee တို့သည် ဆုတောင်းပဌနာပြုသောသူများဖြစ်လာကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုးထမှုကို “ထိတွေ့ခွင့်” ရရှိခဲ့ကြသည်။ ထိုနေ့ရက်များတွင် ဒေါက် တာ Cagan နှင့် ကျွန်ုပ်က ဘုရားသခင်ဆင်းသက်လာသောအခါ လူတို့ပြောင်းလဲလာကြ သော်လည်း ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်မဆင်းသက်သောအခါ ဘာမျှဖြစ်မလာကြောင်း ကို သင်ယူလေ့လာခဲ့ကြရပါသည်။ Aaron နှင့် Jack Ngann တို့ကလည်း တစ်ခုခုကို သင်ယူ လေ့လာခဲ့ကြရသည်။ စာတန်၏တန်ခိုးကို ဆုတောင်းခြင်းတွင် အဘယ်သို့တိုက်ခိုက်ရမည်ကို သင်ယူလေ့လာခဲ့ကြရပါသည်။ Jack က ဤသို့ဆိုထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်အတွက် စတင်၍ ဆုတောင်းနေသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယအကြိမ်ဆုတောင်းခြင်းကို အစပြုသောအခါ ကျက်သီးထသလိုခံစားပြီး အားနည်းလာသည်။ စုပေါင်းဆုတောင်းခြင်းတွင် ခက်ခဲမှုရှိလာသည်။ နတ်ဆိုး၏ ဆီး တားမှုများကိုလည်း ကြုံတွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဆက်လက်၍ ဆုမတောင်းနိုင်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ဒူးထောက်ပြီး ခရစ်တော်၏ အသွေးတော်ကို တောင်းလျှောက်နေစဉ် နတ်ဆိုး၏မျက်မှောက် ကွယ်ပျောက်စေရန် ဘုရားသခင်အား ဆုတောင်းပဌနာပြုပါ သည်။ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် မျက်နှာမူသည့်အနေအထားဖြင့် အဆုံး သတ်သွားခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေဖြင့် သုံးကြိမ်ပတ်လည် ဆု တောင်းခြင်းအစပြုခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် အမှောင်အားဖြင့် ချိုးဖဲ့ကြောင်း စတင်ခံစားလာပြီး နတ်ဆိုးတည်ရှိခြင်းသည်လည်း ပျောက်ကွယ်သွားပါသည်။ (ညနေပိုင်းအစီအစဉ်သည်) အရေးပါ သောအချက်ဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိထားပါသည်။ ၎င်း သည် ညနေ ၄း ၀၀ အချိန်တွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
နောက်ထပ်နာရီနှစ်ချက်ကျော်လွန်လာပြီး ညနေပိုင်းအစီအစဉ်ကျရောက်လာသောအ ခါ မစ္စတာ Virgel Nickell သည် မျက်ရည်ဖြင့် ရှေ့သို့လာပြီး ဒေါက်တာ Cagan သည် ၎င်း အား ခရစ်တော်ထံပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ Aaron နှင့် Jack တို့သည် ဆုတောင်းခြင်းတွင် နာရီ နှစ်ချက်ပိုစော၍ အဘယ့်ကြောင့် ဆုတောင်းခြင်း၌ စာတန်နှင့်တိုက်ခိုက်နေရသည်ကို ကျွန်ုပ် တို့ သိရှိခဲ့ကြသည်။
“အကြောင်းမူကား၊ ငါတို့သည် အသွေးအသားရှိသော ရန်သူတို့နှင့် ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြသည်မဟုတ်။ အထွဋ်အမြတ်တို့နှင့်၎င်း၊ အာဏာစက်တို့နှင့်၎င်း၊ လောကီမှောင်မိုက်၌ အစိုးတရပြုလုပ် သော မင်းတို့နှင့်၎င်း မိုဃ်းကောင်းကင်၌နေသော နတ်ဆိုးတို့နှင့် ၎င်း၊ ဆိုင်ပြိုင်တိုက်လှန်ရကြ၏။” ( ဧဖက် ၆း ၁၂ )
ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲများကို ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် အနိုင်ယူသည်။
“ငါ့ကိုခေါ်လော့ငါထူးမည်။ ကြီးသောအရာ၊ သင်မသိနိုင်အောင် နက် နဲသောအရာတို့ကို ငါပြမည်၊” (ယေရမိ ၃၃း ၃ ) )
“ဆုတောင်းခြင်းတွင် တန်ခိုးရှိသည်” ကို အားလုံးမတ်တပ်ရပ်သီဆိုကြပါစို့။
ဆုတောင်းခြင်းတန်ခိုး၊ သခင်ဘုရား၊ ဆုတောင်းခြင်းတန်ခိုး၊
(“ဆုတောင်းနည်းကိုသွန်သင်ပါ” Albert S. Reitz, ၁၈၇၉-၁၉၆၆).
တတိယစာကြောင်းကို “ကျွန်ုပ်တို့နိုးထမှုလိုလား၊ စိတ်ပျက်စရာ စိတ်ဝိညာဉ်တရား၊
စာတန်သည် သင်တို့တွင် နိုးထမှုအတွက် ဆုတောင်းခြင်း၌ ပိတ်ထားခြင်းခံရကြ သည်။ လွန်ခဲ့သော ကြာသပတေးညတွင် ကျွန်ုပ်မဲထည့်သည်။ ကျွန်ုပ်က “ကျွန်ုပ်က သင်တို့ အား များများဆုတောင်းရန် တောင်းခံသောအခါ ကျွန်ုပ်သည် အသင်းတော်တွင် လူများစွာ ရရှိလိုလားသည်ဟု သင်တို့ထင်ကြသည်” ဟုပြောဆိုသည်။ တစ်ချို့တစ်ဝက်က လက်ထောင် ကြသည်။ ထို့နောက် သူတို့ပြောသည်မှာ “နိုးထမှုရှိဖို့ ဆုတောင်းရန် တောင်းဆိုသောအခါ သင် တို့အား ပိုမိုအလုပ်လုပ်စေချင်သည်ဟု မည်မျှက ထင်မှတ်ကြသည်နည်း။” သင်တို့တွင် သုံးပုံတစ်ပုံက လက်မြှောက်ကြသည်။ အဲဒါ ထိပ်လန့်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ အချိန်တိုင်း သင်တို့ အား ပြောဆိုထားသည်မှာ “လူများလာဖို့အတွက်သက်သက်မဟုတ္ပါ။” “ပိုမိုအလုပ်လုပ်ဖို့ရန် အတွက်လည်းမဟုတ်ပါ။ “နိုးထမှုဖြစ်လာသောအခါ အလုပ္နည်းလာသည်” ဟုအချိန်တိုင်း သင်တို့တွင် ပြောနေရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုတွင် အလည်အပတ်လာသူ တစ်ယောက်ရဖို့အတွက် နာမည် ပေါင်းတစ်ရာလောက်ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအလည်အပတ်လာသူတို့သည် လုံး၀ပြန်မလာ ကြပါ။ နိုးထမှုတွင် သာ၍နည်းသောသူများကိုသာရရှိကြသည်။ သို့ရာတွင် အလည်အပတ် လာသူများစွာကို ရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဧဝံဂေလိတရားကို တံခါးပိတ်ထားပြီး များစွာသော လူတို့လာပြီး ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြသည်။ တရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်တွင် ဧဝံဂေလိ လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်လေ့မရှိပါ။ စက်ဘီးကို စီစဉ်ထားလေ့လည်း မရှိပါ။ သို့ရာတွင် လူပေါင်း ၂၀၀၀ လောက်လာပြီး နေမြဲနေကြသည်။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ အကြောင်းမှာ သူတို့သည် နိုးထမှုကို ရရှိကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သာလျှင်ဖြစ်သည်။ ထိုအ ကြောင်းကို ရှေးက ပြောခဲ့ဖူးပါသည်။ သို့ရာတွင် သင်တို့သည် ကျွန်ုပ်အား ယုံကြည်လက်ခံ ခြင်းမရှိပါ။ သင်တို့သည် မြင်တွေ့ဖူးခြင်းမရှိသည်အတွက် ယုံကြည်ခြင်းလည်း မရှိကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေပြုကျမ်းကို ဖတ်ရှုကြပါစို့။
“ငါ့ကိုခေါ်လော့ငါထူးမည်။ ကြီးသောအရာ၊ သင်မသိနိုင်အောင် နက် နဲသောအရာတို့ကို ငါပြမည်၊” ( ယေရမိ ၃၃း ၃ ) )
“ကြီးမားသောအရာ၊ သင်မသိနိုင်အောင္ နက်နဲသောအရာတို့ကိုငါပြမည်။” ထိုအရာကို ယုံ ကြည်နိုင်ပါရဲ့လား။ ဘုရားသခင်သည် သင်မမြင်နိုင်သောအရာကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို ယုံ ကြည်နိုင်လောက်အောင် နိမ့်ချမှုရှိပါရဲ့လား။ “သင်မသိသောအရာ” ၏ ဆုတောင်းခြင်းအဖြေ ကို ရရှိနိုင်သည်အကြောင်း ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်နိုင်ပါရဲ့လား။ မတ်တပ်ရပ်ပြီး သီချင်းသီ ဆိုကြပါစို့။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပျောက်ဆုံးသောကလေးသူငယ်များ အသင်းတော်ထဲရောက်လာနိုင်ဖို့ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့အလုပ် လုပ်ဆောင်ကြပါစို့။ သူတို့သည် ထိုအရပ်သို့ရောက်သောအခါ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မခံစားနိုင်ကြပါ။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ အကြောင်းမှာ သူသည် တန်ခိုးနှင့်ရှိမနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းသောဘုရားဖြစ်သည်။ “သင်မသိနိုင်အောင်ကြီးသောအရာ၊နက်နဲသောအရာတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း” ကို သင် ယုံကြည်မှုမရှိသည်ကို ဘုရားသခင်က သိတော်မူသည်။ သင်သည် မယုံကြည်နိုင်ဖြစ်နေပါ သည်။ အဲဒါ ပုံပြင်သဘောလို့သာ သင်ထင်မှတနေသည်။ ငါ အသက်ကြီးနေပြီ။ ငါမမြင်ဖူးတဲ့ နိမိတ်ကို ငါမမြင်စဖူးပါဟု သင်က မယုံကြည်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် နိမိတ်များစွာကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြရသည်။ သို့ရာတွင် သင်တို့သည် မယုံ ကြည်ကြသေးပေ။ သုံးဆယ့်ကိုးဦးသောလူတို့သည် အသင်းတော်အဆောက်အဦးကို ကယ် တင်ဖို့ ဒေါ်လာနှစ်သန်းပေးခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ထားသော်လည်း အဘယ်တရား ဟောဆရာကိုမျှမပြောပါ။ သို့ရာတွင် အဆင်ပြေလျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် ကြီးမားသော နိ မိတ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် သင်တို့သည် မယုံကြည်သေးပါ။ မယုံကြည်သေးပါ။ လွန်ခဲ့ သော ရက်အနည်းငယ်က လူ ၁၇ ဦး ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ကြသည်။ သို့ရာတွင် သင်တို့ က မပြင်နိုင်ကြပါ။ ဒါက နိမိတ်ဖြစ်ကြောင်းကို သင်တို့မယုံကြည်ကြပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် John Cagan ကို တရားဟောဆရာအဖြစ် ရလိုက်ကြသည်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင် သင်းအုပ် အသစ်အဖြစ် ရရှိကြသည်။ “ကျွန်ုပ်သည် ထိုသို့မလုပ်ဆောင်ဖူးပါ။” ဒါက နိမိတ်လက္ခဏာပါ။ သို့ရာတွင် သင်တို့က မမြင်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တကမ္ဘာလုံးကိုပို့ပြီး တရားဒေသနာကို ဘာ သာစကား ၃၅ မျိုးဖြင့် အမှုတော်လုပ်ဆောင်နေကြသည်။ သို့ရာတွင် သင်တို့မမြင်နိုင်ပါ။ သင် တို့က ယုံကြည်လက်ခံခြင်းလည်း မရှိကြပါ။
သင်တို့အားလုံးနိုးထပြီး နိုးထမှုနိမိတ်လက္ခဏာအတွက် ဆုတောင်းစေလိုပါသည်။ သို့ မှသာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖာရိရှဲတို့ကဲ့သို့ မဖြစ်မည်အကြောင်းပါ။ ထိုသူတို့က “ထိုမျှလောက်ကြီး စွာသော နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကို သူတို့မျက်မှောက်၌ ပြတော်မူသော်လည်း သူတို့သည် ယုံ ကြည်ခြင်းသို့မရောက်ကြ” ( ယောဟန် ၁၂း ၃၇ ) ဆိုထားသည်။
သင်တို့၏ ဘာသာတရားတွင် ပျော်စရာမရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်သိသည်။ တခါတရံ သင်တို့စိတ်နှလုံးသည် သင်တို့အတွက် ငိုကြွေးနေပါသည်။ သင်တို့တွင် ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိ နိုင်ပါ။ သင်တို့တွင် မျှော်လင့်ခြင်းလည်း မရှိနိုင်ပါ။ သင်တို့သည် ရှံဆုံကဲ့သို့ အိမ်အကျဉ်းထဲ တွင် ကျွန်အဖြစ် ရှိနေကြပါသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ သင်တို့တွင် အချို့တို့အဖို့မူ ဤနေရာသည် အကျဉ်းခံရာအိမ်အဖြစ်ပင် သတ်မှတ်ကြပါသည်။ အစေခံလုပ်ဆောင်သော ဧဝံဂေလိလုပ် ဆောင်ရာနေရာဟုပင် သမုတ်ရပါမည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ရွံ့မုန်းသည်။ သို့ရာတွင် အဘယ်သို့လွတ်မြောက်မည်ကိုမူ နားမလည်ကြပေ။ သင်တို့သည် ဝိညာဉ်ရေးရာနှောင်ကြိုး ဖြင့်ချည်နှောင်ခြင်းကိုခံနေကြရသည်။ ထိုနှောင်ကြိုးဖြင့် မျှော်လင့်ချက်လည်း မရှိကြပါ။ တခါ တရံ ထွက်ခွါဖို့ စဉ်းစားမိသည်။ သင်တို့တွင် အချို့က လုပ်ဆောင်လိုသည်ကို သိသည်။ သို့ရာ တွင် သင်တို့သည် မလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါ။ သင်တို့တွင် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ ဤနေရာ တွင် ရှိနေတတ်ကြလေသည်။ သင်တို့၏ဆွေမျိုးများမှာ ဤနေရာတွင် ရှိနေကြသည်။ သင်တို့ သည် မည်သို့လွတ်မြောက်ကြမည်နည်း။ သင့်အဖို့ ထောင်အိမ်တွင် အလုပ်လုပ်ဆောင်နေ သည်နှင့်တူပါသည်။ သင့်ကို ကျွန်ုပ်ကူညီလိုပါသည်။ ဘုရားသခင်က ထိုအကြောင်းကိုသိ သည်။ လွတ်မြောက်ရမည့်လမ်း တစ်ခုသာရှိသည်။ အဘယ်သို့သိနိုင်မည်နည်း။ အကြောင်း မှာ ငါသည်လည်း ယခု သင်တို့ရှိနေသောနေရာတွင် ရှိခဲ့ဖူးသည်။ အသင်းတော် တွင် ချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရသည်။ လွတ်မြောက်ရန် လမ်းစ ရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ လွတ်မြောက်မည့်လမ်းမှာ ယေရှုသာလျှင်ဖြစ်သည်။ သင့်အပြစ်ကို ဝန်ချတောင်းပန်ပါ။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ သင့်အပြစ် များသည် သင့်အား မှောင်မိုက်စေသောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ခါးကိုစည်းထားပါ။ နောင်တရ ပြီး အသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေပါ။ ယေရှုသည်သာ သင့်အပြစ်ကိုလွှတ် ပိုင်ပြီး သင့်ကို လွတ်မြောက်စေနိုင်မည်။
“အချင်းချင်းတယောက်နှင့်တယောက်ကိုယ်အပြစ်ကို ဘော်ပြ တောင်းပန်ကြလော့။ ချမ်းသာရမည်အကြောင်း….။” ( ယာကုပ် ၅း ၁၆ )
သင်တို့၏ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ သံသယ၊ အပြစ်၊ အမျက်ဒေါသ၊ ခါးသီးခြင်း၊ တကိုယ်ကောင်းဆန် ခြင်းတို့ကို ဝန်ချတောင်းပန်ပါ။ “အချင်းချင်းတယောက်နှင့်တယောက်ကိုယ်အပြစ်ကို ဘော်ပြ တောင်းပန်ကြလော့။ ချမ်းသာရမည်အကြောင်း….။” (ယာကုပ် ၅း ၁၆) မိန်းမကြီးတစ်ဦးသည် ထိုသို့လုပ်ဆောင်သည်။ ယေရှုသည် သူမအနာကို စည်းပေးခဲ့သည်။ လူတစ်ဦးက ထိုသို့လုပ် ဆောင်သည်။ ယေရှုသည် သူ့အား ကျန်းမာစေသည်။ ယခုတွင် မျှော်လင့်ခြင်းရောင်ခြည် သန်းလို့လာလေသည်။ သင်က “ကျွန်ုပ်ကောင်းနိုင်ပါ့မလား” ဟု ထင်လိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါ သည်။ မှန်ပါသည်။ ၎င်းတို့၏အပြစ်ကို ဝန်ချတောင်းပန်ရန် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် ဆု တောင်းပါ။ ယေရှုသည် အနာကို ငြိမ်းစေတော်မူမည်။
“ခရစ်တော်က ၊ ငိုကြွေးမြည်တမ်းသောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏” ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ (မဿဲ ၅း ၄) ဆိုလိုသည်မှာ အပြစ်ကိုမြင်၍ ထိုအရာအပေါ်ငိုကြွေးမြည်တမ်းသူများပင် ဖြစ် ကြသည်။ အပြစ်ဟူသည်မှာ နိုးထမှုကိုအမြဲမျှော်လင့်သောခရစ်ယာန်များအား အမြဲဒုက္ခပေး လေ့ရှိသောအရာဖြစ်ပါသည်။ နိုးထမှုတွင် လောကကြီးက မြင်လေ့မြင်ထမရှိသောအရာ ဖြစ် ပျက်လေ့ရှိပါသည်။ နိုးထမှုတွင် အလင်းတစ်စက်ကို အမှောင်ထဲသို့ ပစ်လွှင့်လိုက်ပြီး နိုးထမှု အတွက် ပြင်ဆင်ထားပါသည်။ Evan Roberts က သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် လူတို့ပြင် ဆင်မှုမရှိသ၍ ကြွဆင်းလာမည်မဟုတ်ဟု လူတို့အား သတိပေးထားသည်။ အသင်းတော်၏ မကောင်းသော ခံစားချက်များကို ဖယ်ရှားရမည်။ သူများမကောင်းကြောင်းပြောဆိုခြင်း၊ မနာ လိုခြင်း၊ နာလည်မှုလွဲမှားခြင်းတို့ကို ဖယ်ရှားရပါမည်။ အပြစ်သားကို ခွင့်မလွှတ်သ၍ (ဆုမ တောင်းပါနှင့်။) သို့ရာတွင် သင်သည် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့်မထိုက်တန်ဟု ခံစားမိလျှင် မြေ ကြီးဆီသို့လှည့်၍ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဝိညာဉ်ကို တောင်းလျှောက်ပါ။ ထိုအချိန်မှသာ သင်အ မှန်တကယ် ရရှိလိမ့်မည်။” ………. သန့်ရှင်းဖြူစင်စွာ အသက်ရှင်သောခရစ်ယာန်များသာလျှင် ဘုရားသခင်နှင့်နီးကပ်စွာ အသက်ရှင်နိုင်သည်။ (Brian H. Edwards, Revival, Evangelical Press, ၂၀၀၄၊ စာ- ၁၁၃) “လူတိုင်းက အခြားလူတိုင်းကို မေ့လျော့နေကြသည်။ လူတိုင်း သည် ဘုရားသခင်နှင့်ထိပ်တိုက်တွေ့ကြသည်။ (သူတို့သည် အပြစ်ကို ဝန်ချတောင်းပန်ကြ သောကြောင့်ဖြစ်သည်။)….(၎င်းမှာ) နိုးထမှုတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော ပုံဆောင်ထားချက် များသာဖြစ်ပါသည်။ နက်နဲမှု၊ သက်သောင့်သက်သာမရှိမှု၊ နှိမ့်ချစွာ အပြစ်ကိုသိမြင်ခြင်းမရှိဘဲ နိုးထမှုမဖြစ်နိုင်ပါ။”(၎င်း၊ စာ-၁၁၆) “ယနေ့တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မသန့်ရှင်းသောအသင်းတော် ကို ပိုင်ဆိုထားကြသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်ယာန်တို့သည် အပြစ်ကို မခံစားတတ် ကြပါ။ သို့မဟုတ် မကြောက်ရွံ့လွန်းကြပါ။ နိုးထမှုကို လုံး၀မျှော်လင့်ထားသောသူတို့သည် ၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးကို စစ်ကြောပြီး ဘုရားရှေ့တော်တွင် သန့်ရှင်းစွာ အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ အ ပြစ်ကိုဖုံးအုပ်လျှင် ယခုဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းမရှိလျှင် (နိုးထမှုကို ရရှိလိမ့်မည်မဟုတ်။).. သန့် ရှင်းသောဘုရားသသည် ခရစ်ယာန်တို့၏ အနည်းငယ်သောအပြစ်ကိုပင် ဂရုစိုက်လျက်ရှိ သည်။ သန့်ရှင်းသောဘုရားသခင်ရှေ့တော်တွင် မိမိကိုယ်ကိုသိသောသူသည် မိမိအပြစ်ကို အမြဲသတိပြုသည်။ ထိုသို့သော အပြစ်ကိုလေးနက်စွာသိထားခြင်းက ဘုရားသခင်၏အပြစ်ခွင့် လွှတ်ခြင်းကို သိရှိကြုံတွေ့လာစေရန် လွှတ်မြောက်ခြင်းရှိသည်။ နှလုံးသားကို ထုခွဲခြင်း နောက်သို့လိုက်ခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းမှ ပွင့်ထွက်လာခြင်းဖြစ် ပါသည်။” (၎င်း၊ စာ-၁၂၀)
“ကိုယ်တော်၏လူတို့သည် က်ိုယ်တော်ကိုအမှီပြု၍ ဝမ်းမြောက်ပါ မည်အကြောင်း၊ တဖန် အကျွန်ုပ်တို့ကို အသက်ရှင်စေတော်မူမည် မဟုတ်လော့။” (ဆာလံ ၈၅း ၆ )
ကျွန်ုပ်တို့သည် မျက်ရည်မျက်ခွက်ဖြင့် အပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းမရှိသ၍ စိတ်နှလုံးသားထဲ တွင် ဝမ်းမြောက်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည် တရုတ်ပြည်တွင် ရှိနေသောအရာပင်ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်တွင် မဖြစ်ရမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ့်အပြစ် ကို ဝန်ချတောင်းပန်ပြီး တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး ဆုတောင်းဖို့ ကြောက်နေကြသည်။ ထိုအရာက သာလျှင် ကျန်းမာစေမည်။ အခြားသူများဆင်ခြင်သောအရာကို ကြောက်နေခြင်းက သင့်အား အပြစ်ဝန်ခံခြင်းမှ ရပ်တန့်စေပါသည်။ ဟေရှာယက “သေရသောလူကို …. ကြောက်ရွံ့သော သင်ကား အဘယ်သို့သောသူဖြစ်သနည်း။ …သင့်ကို ဖန်ဆင်းတော်မူသော ဘုရားသခင်ကို မေ့လျော့၍…” (ဟေရှာယ ၅၁း ၁၂၊ ၁၃) ဟုဆိုထားသည်။
သီချင်းနံပါတ် ၁၀ ကို သီဆိုကြပါစို့။
“အို ဘုရားသခင်၊ အကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြော၍
စုံစမ်း၍ စိတ်အထင်များကိုလည်း သိမှတ်တော်မူပါ။
(ဆာလံ ၁၃၉း ၂၃-၂၄ )
သီချင်းနံပါတ် ၁၇ ကို သီဆိုကြပါစို့။
အတွင်းနှလုံးတွင် အလင်းရိပ်ကို တောက်ပစေ၊
ရူပါရုံကို ပြည့်စေပါ၊ ကျွန်ုပ်မြင်နိုင်ဖို့ရာ၊
သန့်ရှင်းသောပုံရိပ် ကျွန်ုပ်၌ တန်ပြန်စေသတည်။
(“ရူပါရုံကိုပြည့်စေပါ” Avis Burgeson Christiansen, ၁၈၉၅-၁၉၈၅)
သင်သည် အရင်က ဝန်ခံခြင်းမရှိကြပါ။ သင်လုပ်ဆောင်သင့်သည်ကို သိထားသည်။ သို့ရာတွင် ကြောက်ရွှံ့လျက်ရှိသည်။ မိန်းမကြီးတစ်ဦးက သူသည် ဖုန်းဖြင့် နောက်ပြန်လဲ သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထို့နောက် သူမကို တနင်္ဂနွေနေ့နံနက်တွင် ကြည့်သောအခါ သူသည် ကျွန်ုပ်ကိုပြန်ကြည့်သည်။ သူမပြန်လာချင်နေသည်ကို သိရသည်။ သူ့လက်ကိုဆွဲပြီး ကျွန်ုပ်က “ပြန်လာပါ” ဟု ပြောလိုက်သည်။ သူမ ပြန်လာခဲ့သည်။ သူမသည် ပြန်လာဖို့ ကြောက်ရွှံ့နေ သည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူမသည် သင်းထောက်၏မိန်းမဖြစ်နေသည်။ သူမ၏ အပြစ်ကို ဝန်ချ တောင်းပန်လိုက်လျှင် လူတို့သည် မည်သို့ထင်မှတ်ကြမည်နည်း။ အခြားသူများ စဉ်းစားမည့်အ ရာကို မေ့လိုက်ပါ။ အားလုံးမတ်တပ်ရပ်သီချင်းဆိုစဉ်တွင် ဤနေရာသို့လာပြီး ဒူးထောက်ပါ။ သင့်အပြစ်ကို ဝန်ချတောင်းပန်ပါ။ ဘုရားသခင်က သင့်အပြစ်ကို မြင်စေမည်။ သင့်အား အသစ်ဖြစ်စေရန် ယေရှုသည် ၎င်း၏အသွေးတော်ကို လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် သွန်းလောင်းခဲ့ပါ သည်။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီ မစ္စတာ Noah Song က ကျမ်းစာဖတ်ကြားသည်။ ၁ယော ၁း ၅-၁၀။
“အသက်မုန့်"၊(Bessie P. Head, ၁၈၅၀-၁၉၃၆ ရေးစပ်သည်။)